FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA AKITA INU JAPONEY - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Akita Inu Japoney
Akitas Japoney, Tamami ary Akemi
Lisitry ny alika mifangaro Akita
Misy karazany roa ny Akitas, ny karazana Akita Japoney tany am-boalohany ary fanondroana iray hafa ankehitriny Amerikana Akitas mahazatra . Tsy mitovy ny lanja sy ny refy ary ny fenitra amerikana dia mamela saron-tava mainty, fa ny fenitra japoney voalohany kosa dia tsy mamela saron-tava mainty. Raha ny filazan'ny FCI, any Japon sy any amin'ny firenena maro hafa eran'izao tontolo izao ny Akita Amerikanina dia raisina ho karazana misaraka amin'ny Akita Inu (Akita Japoney). Any Etazonia sy Kanada, ny Akita Amerikanina sy ny Akita Inu dia samy raisina ho karazana tokana misy fahasamihafana karazany fa tsy karazany roa.
Alika Japoney mahafinaritra
AH-ki-ta (fanononana Japoney mety, miaraka amin'ny fanamafisana napetraka amin'ny vaninteny voalohany)
a-KEE-ta Inu (fanononana tonony kokoa amin'ny Tandrefana)
Ny lehibe indrindra amin'ny karazany Japoney Spitz, ny Akita, tononina a-KEE-ta, dia alika matanjaka, mafy orina, mifandanja tsara ary miavaka. Mahery sy hozatra miaraka amina loha fisaka sy mavesatra ary vava fohy sy fohy, ny Akita dia manana tratra lalina sy malalaka ary lamosina miverina. Somary lava kokoa noho ny halavany ilay alika. Ny loha dia miendrika telozoro, malalaka sy mivolombola. Ny fijanonana, izay faritry ny tetezamita hatrany ambadika mankany amin'ny vava, dia voafaritra tsara. Manalalaka tsara ny handrina ny vavano kely. Kely ny sofina ary atsangana, entina mandroso ary mifanaraka amin'ny hatoka. Ny maso mainty volontany dia kely ary misy endrika telozoro. Malalaka sy mainty ny orona. Avela amin'ny Akitas fotsy ny volontany, fa aleon'ny mainty. Mainty ny molotra ary mavokely ny lela. Mahery ny nify ary tokony hihaona amin'ny hety na manaikitra ambany (ny hety dia tian'ny ankamaroan'ny mpiompy). Ny rambony dia malalaka ary entina any an-damosin'ilay alika. Toy ny saka ny tongotra amin'ny Internet. Ny Akita dia mifono indroa. Ny palitao ivelany dia henjana sy tsy tantera-drano. Ny undercoat dia matevina sy malefaka, manome insulate tsara ho an'ny alika amin'ny toetr'andro mangatsiaka. Ny loko palitao dia fotsy fotsy, mena, sesame, brindle ary fawn. Ny loko dia tokony tsy hisy sisin-tany mazava. Voarara ny sarontava mainty.
Ny Akita dia marefo, manan-tsaina, be herim-po ary tsy matahotra. Mitandrina sy tena tia ny fianakaviany. Indraindray ho azy, mila mafy orina, matoky tena, tsy miovaova mpitarika fonosana . Raha tsy misy azy dia ho alika ny alika tena ninia ary mety ho lasa mahery setra amin'ny alika sy biby hafa. Mila izany fiofanana mafy orina toy ny alika kely. Ny tanjona amin'ny fampiofanana an'io alika io dia ny hahatratra ny toeran'ny mpitarika pack . Voajanahary voajanahary ho an'ny alika ny manana baiko ao anaty fonosany . Rehefa miaina miaraka amin'ny alika isika olombelona dia lasa fonosin'izy ireo isika. Ny fonosana iray manontolo dia miara-miasa amin'ny mpitarika tokana. Voafaritra mazava ny tsipika. Ianao sy ny olombelona hafa rehetra TSY MAINTSY avo kokoa amin'ny filaharana noho ny alika. Izay no fomba tokana hahombiazan ny fifandraisanareo. Raha avela hino ny alika dia izy no mpitarika an'io olona mety ho lasa fananana be izy rehefa miteny amin'ny olombelona mba hiandry ny anjarany. Mihinana aloha izy. Alika mpiambina kilasy voalohany ny Akita Inu. Matetika ny renim-pianakaviana Japoney dia mamela ny zanany ho karakarain'ny fianakaviana Akita. Tena mahatoky izy ireo ary miroborobo amin'ny fitarihana hentitra avy amin'ny mpitantana azy. Tokony harahi-maso miaraka amin'ireo biby fiompy sy ankizy hafa ao an-trano izany. Na dia mety mandefitra sy tsara amin'ny ankizy avy amin'ny fianakaviany aza ny karazany, raha tsy mampianatra an'io alika io ianao dia ambany noho ny olombelona rehetra izy ao amin'ny baiko entana mety tsy hanaiky ankizy hafa izy ary raha ihomehezana dia mety manaikitra i Akita. Ny ankizy dia tsy maintsy ampianarina haneho toetra mitarika ary hanaja ny alika. Miaraka amin'ny karazana tompona mety, ny habetsaky ny fanatanjahan-tena ara-tsaina sy ara-batana isan'andro ary ny fampiofanana hentitra, dia afaka manao biby fiompy tsara izy ireo. Mila faharetana ny fampiofanana momba ny fankatoavana, satria mazàna mankaleo haingana ireo alika ireo. Ny Akita Inu dia mila miaraka amin'ny fianakaviany. Manakoako amina feo mahaliana maro izy io, saingy tsy dia mibontsina be loatra izy io.
Haavony: Alika 24 - 26 santimetatra (61 - 66 cm) Vehivavy 24 - 26 santimetatra (61 - 66 cm)
Milanja: Alika 75 - 120 pounds (34 - 54 kg) Vehivavy 75 - 110 pounds (34 - 50 kg.)
Mora amin'ny dysplasia amin'ny valahana, na ny hypothyroid na ny autoimmune thyroiditis, ny aretina azo avy amin'ny hery fiarovana toy ny VKH sy Pemphigus, ny olana amin'ny hoditra toy ny SA sy ny maso (PRA, Micro, entropion) ary ny olana hafa amin'ny lohalika.
Ny Akita Inu dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha toa ka ampiasaina tsara. Izy io dia mavitrika mavitrika ao an-trano ary hahomby amin'ny tokotany lehibe.
Ny Akita Inu dia mila fanatanjahan-tena antonony fa tsy tapaka mba hitazomana ny endriny. Tokony horaisina ho mandeha lava isan'andro .
11-15 taona eo ho eo
Alika kely 3 - 12, 7 na 8 eo ho eo
Ny palitao misavoritaka sy henjana ary fohy dia mila fikarakarana lehibe. Borosio amin'ny borosy borosy mafy orina, ary mandro raha tsy tena ilaina tokoa rehefa mandro dia manaisotra ny fanamainana voajanahary amin'ny palitao. Ity karazana ity dia mihena be in-droa isan-taona.
Ny Akita Inu dia nateraky ny nosy Honshu ao amin'ny faritr'i Akita any Japon, izay nijanona tsy niova nandritra ny taonjato maro. Ny Akita Inu dia raisina ho alika nasionalin'i Japon ary iray amin'ireo karazany fito voatondro ho tsangambato voajanahary. Ny karazany dia nanana fampiasana maro, toy ny polisy sy ny asa miaramila, alika mpiambina (governemanta sy sivily), alika mpiady, mpihaza bera sy serfa ary alika sled. Ny Akita Inu dia alika mpihaza marobe, afaka mihaza amin'ny toetr'andro ratsy. Ny vava malefaka an'ny Akita dia ahafahany miasa alika mpamaky vorona rano. Ny alika dia heverina ho masina ary manintona vintana ao amin'ny firenena Japon. Ny sarivongana kely an'ny Akita Inu dia matetika omena ray aman-dreny vaovao aorian'ny nahaterahan'ny zazakely ho fiasan'ny fahasalamana tsara sy ho an'ireo marary ho fihetsika sitrana haingana. Tamin'ny 1937, ny Akita voalohany, izay nantsoina hoe Kamikaze-go, dia nentin'i Helen Keller nankany Etazonia. Ny alika dia fanomezana natolotra azy nandritra ny diany tany amin'ny Akita Prefecture. Kamikaze-go dia maty tamin'ny alàlan'ny alikaola taolam-paty tsy ela taorian'ny nananganany azy. Tamin'ny volana jolay 1938, Akita iray hafa antsoina hoe Kenzan-go, izay zokin'ilay Akita voalohany, dia nomena azy ho fanomezana ofisialy avy amin'ny governemanta Japoney. Taorian'ny Ady Lehibe Faharoa dia miaramila maro no nitondra alika Akita Inu tany Etazonia.
Misy karazany roa ny Akitas, ny karazana Akita Japoney tany am-boalohany ary fanondroana iray hafa ankehitriny Amerikana Akitas mahazatra . Tsy mitovy ny lanja sy ny refy ary ny fenitra amerikana dia mamela saron-tava mainty, fa ny fenitra japoney voalohany kosa dia tsy mamela saron-tava mainty. Raha ny filazan'ny FCI, any Japon sy any amin'ny firenena maro hafa eran'izao tontolo izao ny Akita Amerikanina dia raisina ho karazana misaraka amin'ny Akita Inu (Akita Japoney). Any Etazonia sy Kanada, ny Akita Amerikanina sy ny Akita Inu dia samy raisina ho karazana tokana misy fahasamihafana karazany fa tsy karazany roa. Ny Akita Japoney dia tsy fahita any amin'ny ankamaroan'ny firenena.
Vondrona Avaratra, Vondrona miasa AKC
JKC = Club Kennel Japon
JACA = Japoney Akita Club of America
WUAC = Fiombonambe eraky ny klioba Akita
'Ity no Akita japoney malalako antsoina hoe Boston (tsy izy no Akita Amerikanina ). Fotsy izy rehetra ary misy crème kely atsipy ao anatiny. '
Boston ilay Akita Japoney purebred tamin'ny 2 taona— 'Tiany ny mandeha an-tongotra amin'ny morontsiraka ary mijery ny rano ary manenjika ny onja. Alika mahatalanjona izy ary milanja 88 pounds ankehitriny. Midika izao tontolo izao amiko. '
Boston ilay Akita Inu Japoney 3 taona milanja 84 pounds
Boston ilay Akita Inu Japoney amin'ny 3 taona
Boston ilay Akita Japoney purebred toy ny alika kely 4 volana
Sary natolotry ny Akita Inu Isamashisa Ken
Fampahalalana Akita (Amerikanina)
Karazana karazana alika Akita
fotsy rehetra any Arizona klee kai
mix bulldog anglisy sy boston terrier
sarin'ny laboratoara rottweiler mix
pitbull sary mifangaro dane mahafinaritra